युद्ध र भोकको अन्त्य — Motivatenews.Com
समय मध्यान्ह एकको आसपासमा घुमिरहेको थियो। एकाविहानै एक गास भात टिपेर कोल्टी हिडेका चन्द्रमणि भोक र प्यासले रन्थनियपछि बाटै छेउको पसलभित्र छिर्छन् र चाउचाउ बनाउन लगाउन्छन। साहुजीले चाउचाउ बनाइरहदा चन्द्रमणिका आखाँ आंगनीको पल्लो छेउमा बसिरहेकी अधबैंसे आइमाई र किशोरी माथि पर्छ जो पानी र नुनसंग मकैको रोटी खाइरहेकी थिइन्। चन्द्रमणिले त्यो दृश्य हेरिरहन सकेनन् , साहुजीलाई थप दुई प्याकेट चाउचाउ बनाउन लगाए। चाउचाउ तयार भएपछि उनले त्यो चाउचाउ ति अधबैंसे आइमाई र किशोरीलाई दिन अनुरोध गरे तर साहुजी एकछिन अकमकाए र ति आइमाईको नजिकै गएर सोधे ,
‘खाने केइ भाडो ल्याएर आएकी छौ ? ‘ एकछिन पछि ति किशोरीले खुराको कोच्चीएको थाल लिएर आइन र साहुजीले वरैबाट अलग्गै त्यसमा चाउचाउ हालिदिए। केही नबोली ती किशोरी अगीकै ठाउँमा गएर बसिन र बाँकी रोटीसंग चाउचाउ खान थालिन।
नास्ता खाइसकेपछि चन्द्रमणि त्यहाँबाट हिडे बाटोमा हिडिरहदा उनको आखाँमा अघिनैको दृश्य फनफनी नाच्न थाल्यो ति किशोरीलाई साहुजीले त्यसरी अलग्गै उनकै भाडोमा किन चाउचाउ हालिदिए ? अनि आफुलाई पसल भित्रै बसालेर स-सम्मानका साथ किन खुवाए ? यस्तै प्रश्नहरू उनका दिमागमा खेल्न थाले। बाटो अलिअलि उकालो थियो अलि माथि पुगेपछि दोबाटो आयो, नयाँ मान्छे नयाँ ठाउँ उनलाई कुन बाटो जाने भन्ने थाहा थिएन , कोही त आउला अनि सोधम्ला सोचेर त्यही बसिरहे। एकछिन पछि तिनै आइमाई र किशोरी आइपुगिन्। एकछिन त उनी अकमकाए सोधम्की नसोधम भनेर ,अनि सोधिहाले ‘कोल्टी जाने बाटो कुन हो थाहा छ तपाईहरुलाई ?’
अधबैंसे आइमाईले मधुर स्वरमा भनिन् हप्पल्लो ( माथिल्लो ), हामी पन कोल्टी नै जाने हौ चामल लिन। अब चन्द्रमणिलाई अलि सहज भयो कोल्टी नै पुग्ने मान्छे भेटिएपछि।
अगी अगी अधबैंसे आइमाई र ति किशोरी पछि पछि चन्द्रमणि अलि बाटो हिडेपछि उनले देखे दुवैका खुट्टामा न त जुत्ता थिए न त चप्पल , साथमा एउटा कुम्लो र जिउभरि टालिएका लुगा। कौतुहलता लाग्यो उनलार्ई र गएर सोध्न खोज्य तर यतिकैमा अधबैंसे आइमाईले उनलाई नै सोधीहालिन, तपाईंको घर मधेसतिर हो ? हाम्रा गाउँमा पनि पहिला मधेसतिरका मास्टर बस्दा थिया।
चन्द्रमणिले हो भनी टाउको हल्लाए हुन नि उनी कालो वणका लामो दारी पालेका बर्ष चौबीस पच्चीसका तराईतिरकै वासिन्दा थिए।
अनि चन्द्रमणिले नि सोधे ,तपाईंहरूको घर कहाँ हो ?
अधबैंसे आइमाईले भन्न थालिन् के घर छ भन्नु सर, नाननानु (सानो )झुपडी छ त्यही अगि चाउचाउ खाएको ठाउँबाट तिन चार बेल(धण्टा)हिड्नु पर्छ , गोत्री भन्दाछन सर ठउरको (ठाउँको ) नाम।
उनले फेरि सोधछन ,अनि यसरी खाली खुट्टै किन हिड्नु भएको ?घरबाट भागेर आउनुभएको त होइन ?
सुस्केरा हाल्दै भन्न थालिन् भागेर नि जाने ठाउँ का छ र सर, हामी गरिबकन ‘पेटउदो हाल्ने चारो नाई खुट्टाउरा जुत्ता क्या चाइने छन्’।
एकछिन पछि भक्कानिदै ति आईमाई आफ्नो बेथा पोख्न थाल्छिन् , मकन (मलाई )सबै सुकिली दमाई भन्दा छन अहिले एक बिसै एघारकी(३१ बर्षकी) भया होउला ,यो मेरी भाउ (छोरी )हो। मेरो ब्या (विवाह ) भयाको पन्ध्र वर्ष भयो होला , यसका बा (बुबा ) बम्बई (भारत) गएर कमाएर ल्याउदा थिया अरुबेला यही घर लाउने मिस्त्री काम गर्दा थिया। जसोतसो छाक टरिरहेको थियो। गाउँभरि अलि बलिया यसैका बा थिया सकेसम्म सबैको काम गर्दा थिया।
एकरात अबेर चार पाँच जना टाउकोमा राता कपडा बाधेका (मावोबादी) आएर यस्का बालाई पल्लो गाउँ चिठ्ठी पुर्याइदिनु पर्यो भने। यस्का बाले यति राती यो पुस माघको चिसोमा कर्णाली तर्न सकिदैन भोलि छकालै (विहानै) जाउला भने तर का मान्थे र ति टाउकोमा राता टाला (कपडा )बानेका मान्छेहरुले लिएर गए यसका बालाई। रात भरी ढुलेई(निन्द्रा ) लागेन। त्या पारी गाउँ जान नि अहिलेको जस्तो पुल थिएनन् सर बाबियाको लडामा (डोरी) सुर खेलेर जानु पर्थ्यो ज्यान हत्केलामा राखेर।
दुईदिन सम्म यस्का बाको हरिखबर (खबर) भएन ,अर्को दिन माथि बावनवडा बडाजु (मुखिया)का खलावनी (आँगनमा) मस्तै (धेरै ) मान्छे जम्मा भएका थिए। क्या भएको रहेछ भनि म यो दुधे भाउ (छोरी ) छोडेर गए,यस्का बालाई डोरीले बाँधेर खलामा (आँगनमा) लडाएका थिए र तिनै टाउकोमा राता टाला बाधेका मान्छेले (मावोबादी )हात हातमा मुसल ( धान कुट्न प्रयोग गरिने डण्डा ) लिएर उभिएका थिए। म त्या पुग्दा तिनिहरुले यस्का बालाई पेलि (कुटी) सकेका रहेछन् , तिनै मावोबादी मध्ये एकले भन्यो हाम्रो भनेको नमान्नेको यस्तै हालत हुन्छ बुझनुभयो भनि सबैलाई थर्कायो।
एकछिन पछि फेरि तिनिहरुले पेल्न (कुट्न) थाल्य ,खलाभरि (आँगन) रगत थियो म त्यही वेहोस भएछु। होस आउँदा कोही थिएनन् त्यहाँ, यस्का बालाई नि का लगेर गएछन्। पछि बाहुनवडाका एकजना गोसी (देवर)ले सुनाए तम्मा पोइकन (श्रीमन) माओवादीले अधमर्दो बनाइ खाल्डो खनेर पुरिदिए माथि जङ्गलमा। मैले पुरै जङ्गलमा खोजे काइथि (कहाँ ) पुरेका छन् भनी। चल्ला ,बाघ भालुले खोर्सेको ठाउँमा नि यही पो हो कि भनी खनेर हेरे। दुई तीन दिनसम्म भोकै त्यही जङ्गलमा यस्का बालाई खोजे ,अरुबेला घास दाउरा जादा बाघ भालुको डर मान्ने म त्यसबेला केहीको डर लागेन। यसरी यस्का बालाई माओवादीले मारेर का फाले था नाई। न लास पाइयो न सास। एक आख त मैले भागेर बम्बई गया हुन्ना सोचे ,केही वर्षपछि युद्धविराम कि के भयो अरे ‘अरुका पोई (श्रीमान् ) घर आए यस्का बा आएनन’। का पो हो सबैले रुपैयाँ पाएछन् द्वन्द्वपीडितको नाममा यस्का बाको नाम नै थिएन रे त्यहाँ। भएनी टाठाबाठा ठालुले निकालेर खाया हुन्ना सर म लाटीकन केई था नाई।
सुकुली दमाईले आफ्नो बेथा पोखीरहदा उनको भन्दा चन्द्रमणिका आसुँ बढी बगे। उनको मन सायद हलुङ्गो भयो होला बर्षौदेखि गुम्सिएर रहेका बेथा पोख्दा तर चन्द्रमणिको मन भारी भएर आयो , खुट्टाहरु चल्न छाडे र त्यही थचक्क बस्न पुगे। उनलाई बसेको देखेर ती किशोरीले सरलाई ग्राहो भयाजस्तो छ झोला म बोकि दिउला भनेर चन्द्रमणिको झोला बोकेर उनी भन्दा अगि अगि हिड्न थालिन।
अलिकति हिडेपछि चन्द्रमणिले फेरि सोध्छन ,अनि तपाईंहरूलाई कसैले सहयोग गरेनन् ?
को छन र सर हाम्रा ,सासु ससुरा मेरो ब्या (बिवाह ) गर्नुभन्दा पहिलै भिडदै लोटी मरिगया। एक गोसी (देवर)थिया नानै (सानोछदै ) बम्बई गएका हुन् अहिले सम्म केइ खबर नाई बाचेका छन कि मरिगया ति नि। मैले गाउँलेको जुठो खाइकनै यस्कन पाले अर्काको बर्षिको (पुरानो )टाला लाया। गाउँलेको पोर्सो (मल)बोके मेलापात गरे ,घर खाने एक गेडो अन्न नाई सर त्यही भएर कोल्टी चामल दिदा छन् अरे ल्याउन जान लागेकी हामी आमाछोरी।
कोल्टी पुग्न पुग्नै लाग्दा छोरीचाहीले चन्द्रमणिलाई झोला दिदै भनिन् , सर तम्मो घर का हो ?का जाने होऊ ?चन्द्रमणिले मन ग्रहुगो पार्दै भने धनगढी जाने होउ भोलि पेलेनबाट। छोरीचाहीले फ्याट्ट भनि हाली पेलेन मैले पनि देखेकी छु , हप्प (माथि) आकाशउरो उडडो छ। हाम्रा घरका पाखाउरो जादो छ।
चन्द्रमणिले गोजीबाट केही पैसा निकालेर सुकिली दमाईतिर बढाउदै साझ बसेको ठाउँमा भात खानु भने तर सुकिलीले पैसा लिनै मानिनन र भन्नथालिन नाइ सर आजसम्म यत्तो पैसा देखेकि नि नाइ तेइ नि या कोल्टीमा हामीकन कोइ भात दिदैनन् या सबै हामीकन नछुने मान्छे बस्दाछन। हामी यै कही गोठ बसैला सर एक रात। चन्द्रमणि भावविह्वल भए त्यसो भए भोलि चामल किनेर घर लिनु भनि फेरि पैसा उनीतिर बढाए तर सुकिलीले पैसा लिन मानिनन्। साझ पर्नै लागिसकेको थियो सुकिलीकी आमाछोरी चन्द्रमणिबाट छुट्टिए। उनि नि एयरपोर्ट नजिकैको होटलतिर लागे।
कोठा छ बस्ने ? चन्द्रमणिले मगर मगर जस्ता देखिने होटलका साहुलाई सोधे , भात खाने भयापछि ढुल्ने (सुत्ने ) ठाउँ छ नत्र नाई। उनले हुन्छ भात खाने हो भने। घर कहाँ हो कुन जातका होउ इत्यादि प्रश्न गरे। चन्द्रमणिले नि ठट्यौली पारामा भने नाक हेरी चिनेनै ,धनगढी जाने होउ। ए त्यसो भए कर्मचारी पो होउ ?साहुले उनलाई पाड (घरको माथिल्लो तला) लिएर गए र खाट देखाउदै ,कर्मचारी परेछऊ यही सुतअ या भुइँमा पछि हटेउरु (भरिया) आउदा छन सुत्न।
उनले यसो हेरे भुइँमा पालमात्र फालिएको थियो र खाटमा पातलो पाखि (कम्मल )ओछ्याइएको थियो। ओडनको लागि कपास सबै एकै ठाउँमा खेडिएको सिरक रहेछ अझ त्यसको वास्नाको कुरै नगरौं चन्द्रमणि त्यहा सुते थिए या त्यसको वास्नाले मुर्छा परे उनि आफैलाई थाहा छैन।
विहानपख जिउमा के चिले जस्तो महसुस भएछ चन्द्रमणिलाई। जुरुक्क उठेर टर्च बालेर हेर्छन वहो! ओछ्यानभरि ‘उडुश’ उनको जिउभरि रातै दाग थिए। उज्यालो भइसकेको रहेछ उनी सरासर पेलेनको टिकट लिन हिडे। टिकट घरमा आठ दश जना पालो कुरेर बसेका थिए तर काउन्टरबाट त्यहाँको कर्मचारी कराइ रा थियो ३/४ दिनसम्मलाई टिकट छैन जानुहोस् तपाईंहरू। चन्द्रमणि होटल तिर लागे उनलाई देखेर साहुजीले मुसुक्क हाँस्दै भने टिकट पाउनुभएन ?उनले नाइको संकेतमा मुन्टो हल्लाए। यहा त फ्याट्ट भनेको बेला टिकट कि त जिविसको कर्मचारीले पाउन्छन कि त संस्थाका हाकिमले ,हामी बाजुरेलीले त हेरेर चित्त बुझाउने हो सर। साहुजीले गज्जबको कुरो सिकाए ,कुनै संस्थाको हाकिम होउ भन्नुहोला सर फ्याट्ट दिन्छन टिकट। चन्द्रमणि फेरि टिकट लिन सरासर भित्रै गए। धनगढी मिटिङमा जानुपर्ने भयो एउटा टिकट मिलाउनुहोस भनि काउन्टरमा बसेका कर्मचारीलाई भने। अकमकाएर ति कर्मचारीले उनको हातमा टिकट थमाउदै सोधे सर जिविसबाट कि? चन्द्रमणिले होइन खाध्यबाट भने र त्यहाँ बाट निस्किय। टिकट पाइसकेपछि उनले एक फन्को बजार घुम्ने विचार गरे।घुम्दै जाँदा उनले सुकिली दमाई र उनकी छोरीलाई देखे। उनीहरु चामल लिन खाध्य गोदामतिर जादै थिए। चन्द्रमणि पनि उनीहरुसँगै उतै लागे। जादैगर्दा उनले सुकिलीकी छोरीलाई सोधे , हिजो राति के खायौ का सुत्यौ?
एक रोटो घोगाको (मकैको )थियो तेइ खायौ ,तलन (तल) ओध्याको (भत्किएको) घर थियो तेइ रातभरि आगो तापि बसेउ।त्यसपछि चन्द्रमणिले प्रश्न सोध्ने आट गरेनन्। हिजो बाटोमा भेटिएका दाउराका टुक्राहरु आमाछोरीले किन जम्मा गर्दै हिडेकी थिइन् भन्ने कुरा उनले बल्ल बुझे।
खाध्य संस्थानमा चामल लिनेको लाइन थियो। सुकिलीकी आमाछोरी नि लाइनमा बसे।
त्यहाँ सुकिली जस्तै कैयौ सुकिलीहरु थिए ,एक हातमा तमाखु र अर्को हातमा डोरी लिएर बसेका। कोही कोहीका खुट्टामा हरियो जुत्ता थिए अरु सबैको हालत उस्तै थियो चरचर्ती फुटेका पैताला र टालो माथि टालो हालिएका जिउमा लुगा। सबैले अलि अलि चामल पाए। सुकिलीकी आमाछोरीले नि पाए र बराबर कुम्लोमा हालेर हिड्न तयार भए। उनीहरू त्यति खुसी थिएनन् सायद सोचेको जति चामल नपाएर होला। छोरीचाहीले आमालाई भन्दै थि ‘यत्ति चामलले कति दिन बाचिएला र ‘? उनीहरू हिजो आएको बाटो फर्के, चन्द्रमणि पनि एयरपोर्ट तिर लागे। पेलेन उडेपछि उनले एक पटक नियालेर हेरे कोल्टी ,अलि तल शान्तसंग बगिरहेको कर्णाली र हिजो आफै हिडेर आएको कर्णालीको छालैछालको बाटो।
चन्द्रमणि घर पुगेर खाना खाइ सुत्ने तरखरमा थिए छेउको रेडियोमा समाचार आइरहेको थियो। उनी एकाएक छाँगाबाट खसे जस्तो भए ,समाचार भन्दै थियो’ कोल्टीबाट चामल लिएर आएकी आमाछोरीलाई कर्णालीले बगाएर बेपत्ता’। उनले मनमनै सोचे जो मान्छे असारको भेलमा कर्णाली तरेर आफ्नो गुजारा गर्थिन् त्यही मान्छेलाई पुस माघको कर्णालीले बगायो?उनले पत्याएनन्। त्यो हत्या थियो गरिबीले गरेको हत्या , जनयुद्धले गराएको हत्या , यो समाजले गराएको हत्या। अब यसको जिम्मेवारी को?यस्तै प्रश्नहरूको खिचडी पाक्दै थियो चन्द्रमणिको दिमागमा। सुकिली दमाईको मृत्यु एक भोकको अन्त्य थियो। त्यही भोकसंग लडिरहेका कैयौं सुकिलीहरु छन् ति सुदुर बस्तीहरुमा। तिनिहरुको न्यायका लागि लड्नु छ ,कलम चलाउनु छ ताकि बाकि सुकिलीहरु भोक र गरिबीको कारण आत्महत्या गर्न बाध्य नहुन। यस्तै यस्तै सोच्दै निदाउन पुगेँछन चन्द्रमणि।